Uru na nsogbu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Uru na nsogbu
Kelp akọrọ: uru na nsogbu
A na-ewere ọtụtụ ihe oriri na mmiri dị ka "onye amateur" ngwaahịa. Nke a bụ naanị otu eziokwu - n'eziokwu, ha nwere nnukwu ogige ndị bara uru nke nwere ike ịba uru nye onye ọ bụla. Ma guzoro n'ahịrị a bụ algae. Anyị na-amụtakwu banyere otu n'ime osisi ndị a, chọpụta ihe dị na kelp a mịrị amị, na usoro ụzọ nke ịnweta ntuziaka ndị a tụrụ aro maka iji.
Usneya bearded: na ọgwụgwọ Njirimara nke lichen
Usneya bearded bụ lichen, nke bụ ihe ngwọta siri ike. A na-eji lichen thalli mee ihe maka nlọghachi, ọgwụgwọ ọrịa dị iche iche. Kemgbe oge ochie, a maara banyere uru bara uru nke osisi ahụ. E nyefewo ntụziaka ọgwụgwọ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ma dịrị ndụ ruo taa. Nkọwa na botanical nke Usnea nke bearded bụ lichen na ogologo thallus, nke dị ka ajị agba (ya bụ aha ahụ).
Kedu ihe bara uru sesame maka aru mmadu
Osisi sesame nke nwere aha mara mma nke aha ya bụ Sesame adọtawo uche nke ndi mmadu ihe kariri otu narị ogugu n'ihi uru ya bara uru na ike ya. Ọ chọtara ngwa ngwa na nri, nkà mmụta ọdịnala, cosmetology. Jiri osisi ya nakwa mmanụ. Na uru na nsogbu nke okwu ikpeazụ n'ihu.
Nnu: ihe bara uru na ihe ojoo iji aru aru
Onye ọ bụla n'ime anyị na-eji nnu kwa ụbọchị, na-enweghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na efere ọ bụla ga-eyi ihe na-enweghị isi. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike iji ya na-ekpokọta ihe na-atọ ụtọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ ịnweta ihe a ka ga-adị n'ime ha. Enweghị nnu, ọ gaghị ekwe omume ịchekwa akwụkwọ nri, anụ ma ọ bụ azụ. Taa, anyị ga-amụtakwu ihe ngwaahịa a bụ, ihe mere o ji dị mkpa maka ahụ anyị, na ma è nwere njikọ dị n'etiti ịdị arọ na nnu nnu.
Ndepụta nri nri dị oke obosara na ọ pụrụ isi ike ịdepụta ha, karịsịa ịtụle mmasị dị iche iche gastronom nke agbụrụ dị iche iche. N'isiokwu anyị, anyị ga-atụle otu n'ime ngwaahịa ndị a na - emepụta - abụba abụba (ma ọ bụ abụba abụba), nke na - adịghị adịkarị n'ókèala Ukraine na Russian Federation, dị ka ọ dị na mba ndị ọzọ nke ụwa.
Cinnamon na mmanụ aṅụ: uru Njirimara na contraindications, Ezi ntụziaka
Na ihe mgbu na akpịrị, oyi, maka ebumnuche ịchọ mma na dịka sugar substitute, mmanụ aṅụ dị n'ọgba aghara nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nnabata ọ bụla. Otu ihe a na-emetụtakwa obere osisi cinnamon, nke na-esighị ike iche n'echiche mmanya na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ ọcha ọkụ. Ọtụtụ mgbe, anyị na-eji ngwaahịa ndị a iche iche. Ma n'otu ụzọ, ha nwere ike iweta uru dị ukwuu, nke anyị ga-atụle n'ihu.
Ezi ntụziaka ezughị okè nwere mmasị n'ọtụtụ ụmụ nwanyị, n'ihi ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha nile na-anwa ịchọta nhọrọ kachasị mma maka onwe ha. A maara ọtụtụ ihe banyere uru nke pawuda na mbipụta ọnwụ, ma nke a abụghị ihe onye ọ bụla maara banyere ihe o mere na mmiri ara ehi. Anyị na-atụ aro ka ị tụlee nhọrọ a nke ihe bara uru na ịmatakwu banyere ihe onwunwe ya.